Meksika: Fankalazàna ny Andron’ny Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2010 3:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Deutsch, 日本語, Ελληνικά, English
Fotoana iray miavaka sy mifono misitery ny Andron'ny Maty ankalazain'ny Meksikana isan-taona. Nefa inona tokoa moa no zava-mitranga mandritra io andro io? Nahoana no tena manan-danja be amin'ny fianakaviana Meksikana io andro fitsaharana io?
Chase Buckner dia nanoratra lahatsoratra iray momba ny “Andron'ny Maty any Meksika” ao amin'ny Journey Mexico: The Blog:
Ny Andron'ny Maty, na Dia de los Muertos, dia fety ankalazaina ao Meksika ary matetika no tsy dia takatry ny olona loatra. Na dia, raha ny tena tokony ho izy, ny 2 Novambra no tena Andron'ny Maty, dia nivoatra ny fomba ka nampidirina koa ny 31 Oktobra sy ny 1 Novambra.
Raha ny fomba taloha dia nantsoina hoe Dia de los Angelitos (Andron'ireo Anjely Kely) ny 1 Novambra tany Meksika sady andro fanomezam-boninahitra ny zaza menavava sy ny ankizy nodimandry. Ny 2 Novambra ankehitriny no Dia de los Muertos / Andron'ny Maty rehefa nankalàza ireo olon-dehibe nafoiny ry zareo. Misy ny finoana fa amin'ireo andro ireo, miverina ety an-tany mba hiaraka amin'ny fianakaviany sy ny havan-tsy foiny ny fanahin'ireo efa maty.
Chase Buckner dia manohy amin'ny fitanisàna ny zavatra sasany fampiàsa amin'ity fankalazàna ity:
Zava-dehibe ny anamarihana fa ny fetibe mandritra ireny fankalazàna ireny, indrindra fa ny Dia de los Angelitos sy ny Dia de los Muertos manokana, dia samihafa arakaraky ny faritra any Meksika. Any amin'ny faritra sasantsasany, manana ny toerana lehibe tànany ny fàsana noho ny any amin'ny faritra hafa ka ny trano izay nanangànana alitara sy toerana masina no ivon'ny fankalazàna. Entina eny am-pàsana sy ny alitara natao hanomezam-boninahitra ireo nodimandry ireo sakafo sy zava-piotro nankafiziny, ary any amin'ny faritra sasany dia ankalazain'ny olona amin'ny fikarakarana fiaraha-misakafo mifototra amina sakafo manokana sy vatomamy ny fahatsiarovana ny fodiamandrin'ny ankizy.
Fehezin'i Buckner amin'ny fanoratàna mikasika endrika hafa amin'ilay fankalazàna, toy ny La Catrina sy ny the Calaveritas, ankoatry ny zavatra hafa:
Na ny fanahy itondràna ireny fety ireny aza dia miovaova miainga amin'ny alahelo ka tonga hatramin'ny vazivazy, satria ny fianakaviana dia mampahatsiahy vanim-potoana nahatsikaiky sy tantaram-piainana nodiavin'ilay nodimandry. Ny iray amin'ireo zavatra mampiavaka ny Dia de los Muertos ao Meksika, ny fampisehoana Catrina (sary vongana kely maneho kàrana nampiakanjoana tsara), nanomboka avy amin'ny kisarisary anesoana ireo sokajina Meksikana manana saranga miavaka, ary amin'ny fomba nentin-drazana hafa dia manoratra tononkalo antsoina hoe calaveras (“karandoha”) ny olona, izay soratsoratra fanao eny am-pàsana ho fahatsiarovana manesoeso ny fomba hafahafa fanaon'ilay maty, ireo vanim-potoana nahatsikaiky niainany nandritra ireo lasany.
La Calavera Catrina ("Ilay taolampaty mihaja") sary avy amin'i Tomascastelazo, mpampiasa Wikimedia Commons, nampiasaina eo ambany fiarovan'ny Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.0 Generic license."
Zava-mahazatra ho an'ireo fianakaviana Meksikana ny manàngana ny alitarany manokana na toerana masina kely iray ao an-trano, satria inoan-dry zareo fa ho avy amin'iny alina iny ny fanahin'ireo havan-tiany ka hàka ny hanitr'ireo zavatra napetraka teo amin'ny alitara. Judy King ao amin'ny Mexconnect dia manazava ny hevitry ny zavatra rehetra apetraka eny amin'ny alitara:
Jiro efatra (labozia) no apetraka eny amin'ny zoro ho fanehoana ny tendrontany efatra. Jiro iray no arehitra ho an'ny havana nodimandry tsirairay, ary iray hafa amboniny mba tsy hisian'ny hoe nisy adino. Ireo jiro, izay fanehoana ny fanantenana sy ny finoana, dia mirehitra mandritra ny alina tontolo, mba tsy hisy haizina intsony …
Raha rakotr'ireo sakafo, zava-mamy, zava-pisotro sy voankazo notàzana nankafizin'ny fanahin'ny fianakaviana tsirairay avy ny ankamaroan'ireo alitara, dia na ireo faran'izay tsotra indrindra aza dia nahitana an'ireo filàna fototra:
RANO ho fanamaivànana ny hetaheta sy ho fandio [Avy amin'ny mpandika: Fandio eo amin'ny lafiny ara-panahy, toy ny hoe famelan-keloka]
SIRA ho lalivain'ny sakafo sy ho fandio
MOFO hanehoana ny sakafo ilaina mba hahavelona
Koveta iray, savony, fitaratra sy fihogo no apetraka tsy lavitra eo mba hahafahan'ireo fanahy hikarakara vatana rehefa miverina ry zareo.
Ireo taolampaty nataon-tànana, ny Calaveras, dia tena mahatsikaiky sy mahatehotia ery fa tsy mampahatahotra na maharikoriko. Maneho ireo havan-tiana nodimandry izy ireny, ny zava-panaony sy nahaliana azy. Ary satria izy ireny napetraka teny amin'ny alitara, ireo taolampaty mahafatifaty dia mampitamberina ireo tsiaro mahafinaritra sy mamerina ny tsiky ho an'ireo nitanondrika. Ireo endrika, miaraka amin'ny fofo-manitry ny sakafo tsy foiny, dia manampy ireo fanahy hahita ny trano tokony halehany.
Ilay mpitoraka bilaogy Gin Hindew 110 avy ao amin'ny bilaogy De La Tierra al Cielo [es] dia manazava ny hevitra fonosin'ireny alitara ireny:
Toerana miavaka manokana mihitsy ny alitara, zavatra masina eo anivon'ny ankohonanay, io no fahatsiarovana ny maty teo aminay, endrika hita mason'ny fomban-drazanay, zavatra iray mampianatra ny taranakay tsy hanadino, mitondra ireo raiamandrenibenay hanakaiky kokoa ny tsiarony, ny alitara dia fomba ataonay mba hidirana ao anaty tontolo iray hafa mihitsy, tsy hoe satria misy voninkazo na sakafo eo , izahay no nametraka an'io ho eo satria te-hahatsiahy izahay, heverinay fa ireo havan-tianay efa nodimandry dia miaraka aminay.
Ao amina tanàna iray ao akaikin'i Mexico City, antsoina hoe Toluca, ny foara Alfeñique dia misy isan-taona; mandàfo ireny vatomamy efa fanao hatrizay ireny ary miendrika karandoha ny mpivarotra, toy izany koa ny amin'ireo karazana vatomamy marobe nataon'ny isan-tokantrano ho amin'io vanim-potoana io. Ny bilaogy One Lucky Life, dia mamoaka sary manodidina ny sasantsasany amin'ireo vatomamin'ny Andron'ny Maty:
Vatomamy voaravaka miendrika karandoha. Sary avy amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra, Andrea Arzaba
Ronono sy voankazo mamy nahazatra hatrizay rehefa vanim-potoana toy izao. Sary avy amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra, Andrea Arzaba
Karandoha mivanitika (Smiley). Sary avy amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra, Andrea Arzaba
Sokolà Catrinas. Sary avy amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra, Andrea Arzaba